हालसम्म विदेशीले दिएका राहतमा के के आयो ? जनबोली न्यूज नेटवर्क प्रा. लि
हालसम्म विदेशीले दिएका राहतमा के के आयो ?
जनबोली /२४ बैशाख,काठमाडौ । नेपालमा गएको महाभुकम्पका कारण भएको ठूलो जनधनको क्षतिप्रति अन्तराष्ट्रिय समुदायले गम्भीर चासो,चिन्ता र मानवीय सहयोगमा सहयोगमा सक्रियता देखाएका छन् । तै पनि सहयोगको आश्वासन र प्रतिबद्धता व्यवहारमा उल्लेख्य छैन । गृह मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म २१ वटा मुलुकले वस्तुगत सहयोग गरेका छन् । मन्त्रालयका अनुसार बस्तुगत सहयोग दिनेमा सबैभन्दा अगाडि छिमेकी मुलुक भारत छ ।
उसले हालसम्म एक हजार दुई सय एक क्वीन्टल चामल,६१ क्वीन्टर चिनी,६८ क्वीन्टल नुन,एक हजार पाँंच सय ८० क्वीन्टल चिउरा,१४ हजार नौ सय ४७ कार्टुन बिस्कुट,चार सय कार्टुन ड्राइ फुड,४४ हजार नौ सय ९४ कार्टुन पानी,नौ हजार आठ सय ८९ कार्टुन चाउचाउ,११ हजार,एक सय ११ थान टेन्ट,एक लाख ३३ हजार तीन सय ५० थान त्रिपाल,एक लाख २६ हजार आठ सय ९० स्थान कम्मल,६ हजार एक सय मेट्रस औषभी आएको छ ।भारतले अन्य केही खाद्य वस्तु र औषधी समेत दिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
त्यसैगरी बंगलादेशले पाँंच सय कार्टुन विस्कुट,तीन सय ६४ कार्टुन पानी,४सय ४५ स्थान टेन्ट र ४० औषधीका बक्स दिएको छ । म्यानमारले दिएको पनि केही बस्तुगत सहयोग नेपाल सरकारले प्राप्त गरी वितरण गरेको छ । म्यानमारले एक सय ७० कार्टुन चाउचाउ र एक हजार बेडसिट नेपाल सरकारलाई दिएको छ ।
पाकिस्तानले एक सय ४२ कार्टुन खाद्य वस्तु,एक हजार पाँंच सय थान टेन्ट,तीन सय ३० कम्मल नेपाल सरकारलाई दिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार चीन ले एक हजार एक सय कार्टुन पानी,दुई हजार ५३ थान टेन्ट,७८ त्रिपाल,आठ हजार चार४० थान कम्बल,४० मेट्रस थान र १५ सय अन्य गैर खाद्य वस्तु दिएको छ ।
नेपाल सरकारलाई प्राप्त अन्य वस्तुहरुमा थाइल्याण्डबाट दुई सय ७ क्वीन्टल चामल,३४ अन्य खाद्य वस्तु,८७ थान टेन्ट,दुई हजार दुई सय ९२ थान कम्बल,सात सय ३१ मेट्रस थान,एक सय १२ अन्य गैर खाद्य वस्तु रहेका छन् ।
त्यसैगरी श्रीलंकाले एक सय ७३ कार्टुन चाउचाउ,तीन सय ८७ कार्टुन पानी र दुई सय ट कार्टुन अन्य खाद्य वस्तु र एक सय ८५ थान औषधी प्रदान गरेको छ । त्यसैगरी तीन हजार दुई सय २८ प्याकेट विभिन्न खाद्य वस्तु,एक सय ३९ थान टेन्ट,६ सय १७ थान त्रिपाल,छ हजार छ सय ९४ थान कम्बल,एक हजार एक सय ५१ थान मेट्रस र एक सय ३० कार्टुन अन्य गैर खाद्य वस्तु पनि नेपाल सरकारलाई प्राप्त भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
त्यसैगरी अजरबैजानबाट एक सय ७३ कार्टुन चाउचाउ,१९ कार्टुन पानी,८४थान त्रिपाल,चार सय २७ थान कम्बल र एक सय २२ बक्स औषधी रहेका छन् । दक्षिण कोरियाले ९३ थान टेन्ट,अल्जेरियाले ९२ थान टेन्ट,दुई हजार आठ सय ८२ थान कम्बल,दुई हजार ८० थान औषधी नेपाल सरकारलाई प्रदान गरेको छ । त्यसैगरी मर्सिकपले ३२ थान मेडिसिन प्रदान गरेको छ । ओमनले तीन सय ५१ थान मेडिसिन,सिंगापुरले ११ कार्टुन खाद्य वस्तु,तीन हजार तीन सय २० थान कम्बल र चार कार्टुन औषधी उपलब्ध गराएको छ । ओमनले ९८ थान टेन्ट, एक सय ३५ थान कम्बल र एक सय ५५ थान मेट्रस रहेको छ । स्वीटजरल्याण्डले तीन सय ५१ औषधी प्रदान गरेको छ भने जर्मनीले ११ औषधीका कार्टुन रहेको छ । क्यानडाले दुई सय १५ औषधी,जापानले पाँंच सय ५६ टेन्ट र भुटानले चार सय ८० कार्टुन पानी उपलब्ध गराएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । कतिपय विदेशी मुलुकले नेपाल सरकारलाई हस्तानतरण नै नगरी राहतका सामग्रीहरु वितरण गरेको पनि बुझिएको छ भने कतिपयले गैर सरकारी र सामुदायिक संघ संस्थामार्फत पनि केही सामग्री वितरण गरेका छन् ।